အဆဈမြားကို နာကငျြကိုကျခဲစသေော အကွောငျးအရငျး ၁၆ မြိုး | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အဆဈမြားကို နာကငျြကိုကျခဲစသေော အကွောငျးအရငျး ၁၆ မြိုး
အရိုးတှနေဲ့အတူ ဆကျသှယျနတေဲ့ အဆဈတှကေ အလေးတှကေိုခံနိုငျရညျမရှိပါဘူး။ တဈပေါငျအလေးသယျတိုငျးမှာ ဒူးခေါငျး ပျေါကို ၄ ပေါငျဖိအား သကျရောကျမှုရှိပါတယျ။ ဒီဖိအားက နောကျကြော၊ တငျပါးနဲ့ ခွထေောကျတှကေိုပါ သကျရောကျပွီး အ ဆဈတှဖေိထားတာကွာတဲ့အခါမှာ ဒဏျဖွဈပွီး ပကျြစီးခွငျး၊ နာကငျြကိုကျခဲခွငျးတှေ ဖွဈစပေါတယျ။ အဝလှနျခွငျးကလညျး ရောငျရမျးခွငျးအားပေးပွီး လကျအဆဈတှအေပါအဝငျ အဆဈအားလုံးကို တောငျ့တငျးခွငျး၊ ရောငျရမျးခွငျးနဲ့ နာကငျြခွငျးတှေ ဖွဈစပေါတယျ။
လကျမနဲ့စာရိုကျခွငျးက အရှတျတှကေို ဒဏျဖွဈစပွေီးတော့ လကျမကို ကှေးကှေးလေးအနအေထား ဖွဈနစေပေါတယျ။ ဖုနျးကို ငုံ့ပွီးကွညျ့နခွေငျးကလညျး လညျပငျနဲ့ ပုခုံးအတှကျ မကောငျးပါဘူး။ ခေါငျးရှကေို့ တဈလကျမငုံ့ကွညျ့တိုငျးမှာ ကွှကျသားတှေ အပျေါကို ဝနျပိုပိစပေါတယျ။ လညျပငျးကို ရငျဘတျကိုထိအောငျ အရမျးကှေးခလြိုကျမယျဆိုရငျ ဒါက လညျပငျးကနပွေီး ခေါငျး တဈလုံးတညျးကို မဟုတျဘဲ ခေါငျး၅လုံးရဲ့အလေးခြိနျကို သယျရသလိုဖွဈစပေါတယျ။
ဒေါကျမွငျ့တှစေီးတာ စမတျကတြယျဆိုပမေယျ့လညျး ဒေါကျမွငျ့လလေေ ကိုယျအလေးခြိနျကို ရှကေို့ပိုပွီး သကျရောကျမှုရှိစေ လပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအခါမှာ ဒူးခေါငျးကိုတညျ့မတျစဖေို့အတှကျ ပေါငျကွှကျသားတှပေိုပွီး အလုပျလုပျရတဲ့အတှကျ နာကငျြမှုကို ဖွဈစပေါတယျ။ ဒေါကျတှအေရမျးမွငျ့တဲ့အခါမှာ ဒူးပျေါမှာ အားသကျရောကျမှုတှေ မြားပါတယျ။ ဒီတော့ ဒေါကျမွငျ့ နတေို့ငျးစီး ခွငျးက အရိုးအဆဈရောငျရမျးခွငျး ဖွဈနိုငျခမြေားစပေါတယျ။
စုတျပွတျနတေဲ့ ဖိနပျတှကေခွဖေဝါးနဲ့ ခွကေငျြးဝတျတှကေို ထောကျပံ့မပေးနိုငျတဲ့အတှကျ ဒူးခေါငျး၊ ပေါငျကို ဒဏျဖွဈစပေါ တယျ။ အားကစားဖိနပျတှကေိုလညျး ကိုယျလုပျမယျ့အားကစားနဲ့ သငျ့တျောမှုရှိ/မရှိစဈဆေးပါ။ ဒါပမေယျ့ အလှနျအကြှံ မဖွဈပါ စနေဲ့။ အရမျးအခုအခံမြားတော့လညျး ခွထေောကျကိုသဘာဝအတိုငျး လှုပျရှားမှုမလုပျနိုငျစတေော့တဲ့အတှကျ ခွထေောကျလညျ ပွီး နာကငျြစပေါတယျ။
လကျဆဈခြိုးတဲ့အခါမှာ ဂြှတျဂြှတျဆိုပွီး စိတျကနြေပျလောကျအောငျ အသံထှကျလာတာက အဆဈတဝိုကျမှာရှိတဲ့ အရညျတှေ ကနပွေီး လပေူဖောငျးလေးတှေ ပေါကျထှကျခွငျး (သို့) အရိုးကိုဆနျ့ကငျြပွီး အရှတျကွသှေားတဲ့ အသံဖွဈပါတယျ။ လလေ့ာမှု တဈခုအရ လကျဆဈခြိုးခွငျးက လကျတှရေောငျစပွေီး လကျသီးဆုပျတာကို အားလြော့စတေဲ့အတှကျ ဒီအကငျြ့ကိုဖြောကျတာ ကောငျးပါတယျ။
6. အိတျအလေးမြား သယျဆောငျခွငျး
ပိုကျဆံအိတျ၊ လကျကိုငျအိတျ၊ ကြောပိုးအိတျစသညျဖွငျ့ ဘယျလိုအိတျမဆို အရမျးလေးပါက လညျပငျးနဲ့ ပုခုံးတှကေို နာကငျြ စပေါတယျ။ ပုခုံးတဈဖကျပျေါမှာ အလေးခြိနျအမြားကွီး သယျဆောငျခွငျးက ကိုယျနဟေနျခကျြနဲ့ လမျးလြှောကျမှုပုံစံကို ပကျြစေ ပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးတဈဖကျတညျးနဲ့ အလေးတှကေို အမွဲသယျနခွေငျးက ကွှကျသားတှကေို ဆနျ့အားမြားစပွေီးတော့ အဆဈတှေ ကိုလညျး ဒဏျဖွဈစပေါတယျ။
7. အလုပျလုပျတဲ့နရောမှာ ကွှကျသားအသုံးမှားခွငျး
ကွှကျသားသေးသေးလေးပျေါမှာ ဝနျအားမြားတဲ့အခါ ဒီတနျဖိုးကိုပေးဆပျရမှာပါပဲ။ လေးလံတဲ့ တံခါးကွီးတဈခုကိုဖှငျ့တဲ့အခါမှာ လကျခြောငျးတှနေဲ့တှနျးမယျ့အစား ပုခုံးနဲ့တှနျးမှဖွဈပါမယျ။ ကွမျးပွငျပျေါကပစ်စညျးတဈခုခုကို ကောကျမယျဆိုရငျ ဒူးခေါငျးကို ကှေးပွီး သနျမာတဲ့ခွထေောကျကွှကျသားတှသေုံးပွီး ပွနျထပါ။ ပစ်စညျးတဈခုခုသယျတဲ့အခါမှာ လကျခြောငျးတှကေို ဖိအားဖွဈ စမေယျ့အစား လကျဖဝါးထဲထညျ့ပွီး ကိုယျနဲ့ကပျကာ သယျဆောငျပါ။
မှောကျအိပျတာက ဟောကျတာကိုသကျသာစနေိုငျပမေယျ့လညျး ကနျြတဲ့ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှအေတှကျတော့ မဟုတျပါ ဘူး။ မှောကျအိပျတဲ့အခါမှာ ခေါငျးကိုနောကျလနျစတေဲ့အတှကျ လညျပငျးရိုးကို ဖိအားသကျရောကျစပေါတယျ။ ပကျလကျလှနျ အိပျတာထကျ မှောကျအိပျတာက ခေါငျးကိုတဈဖကျတညျး အခြိနျအကွာကွီးလနျနစေတေဲ့အတှကျ အခွားအဆဈနဲ့ ကွှကျသား တှအေပျေါမှာ ဖိအားသကျရောကျစပေါတယျ။
အကွောလြှော့လကေ့ငျြ့ခနျး ပုံမှနျလုပျခွငျးက ကွှကျသားနဲ့အရှတျတှကေ ကိုသနျမာစသေလို ကှေးဆနျ့ရတာပိုလှယျစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အဆဈတှကေိုပိုပွီး လှယျလှယျကူကူလှုပျရှားစကော အဆဈပတျလညျက ကွှကျသားတှေ အလုပျလုပျတာ ပိုကောငျး စပေါတယျ။ ဒါကအဆဈတှေ ကနျြးမာစဖေို့အတှကျ သော့ခကျြပဲဖွဈပါတယျ။
10. ခှနျအားတိုး လကေ့ငျြ့ခနျး (Strength training) တှကေို ပေါ့ပေ့ါဆဆလုပျခွငျး
အသကျ ၄၀ ရောကျပွီဆိုတာနဲ့ အရိုးတှပေါးလာပွီး ကြိုးနိုငျခမြေားလာပါတယျ။ ခှနျအားတိုး လကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျပွီး ကွှကျသား တှကေို တညျဆောကျမယျဆိုရငျ အရိုးဆုံးရှုံးခွငျးကို လြော့နညျးစပွေီး အရိုးအသဈကွီးထှားလာမှုကို အားပေးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကွှကျသားတှကေို သနျမာလာစရေုံသာမကဘဲ အရိုးသိပျသညျးစလညျး ပိုကောငျးလာစပေါတယျ။ ဒီနှဈခုပေါငျးသှားတဲ့အခါမှာ အဆဈတှကေို တညျငွိမျစပွေီးတော့ ထိခိုကျမှုကို လြော့ကစြပေါတယျ။
11. ဆေးလိပျသောကျခွငျး၊ ကှမျးစားခွငျး
စီးကရကျနဲ့ ကှမျးမှာပါဝငျတဲ့ နီကိုတငျးဓာတျက အရိုးနဲ့ နောကျကြောမှာရှိတဲ့ အရိုးကွားထဲက ခပျြပွားလေးတှဆေီကို သှေးစီး ဆငျးမှု ဖွတျတောကျလိုကျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျကနပွေီး အရိုးတညျဆောကျဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ကယျဆီယမျတှေ အသုံးပွုမှုကို လညျး ကနျ့သတျလိုကျသလို အရိုးကနျြးမာရေးအတှကျလိုအပျတဲ့ အီစရိုဂငျြဟျောမုနျးကို ဖကျြဆီးလိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့ အရိုး ကိုထူစတေဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုအသဈတှကေို နှေးသှားစပေါတယျ။ ဒီအခကျြတှအေားလုံးက အဆဈကို အားနညျးသှားစပွေီး တငျပါးဆုံရိုး ကြိုးလှယျစပေါတယျ။
အိပျရေးဝဝမအိပျခွငျးက အဆဈတှအေပျေါကို ဘယျလိုသကျရောကျမှုရှိတယျဆိုတာ အံ့သွစရာပါပဲ။ လလေ့ာမှုတဈခုအရ အရိုးရောငျရောဂါရှိသူတှကေ အိပျရေးပကျြပွီးနောကျမှာ နာကငျြမှုကိုပိုပွီးခံစားရတယျလို့ တှရှေိ့ရပါတယျ။ ဖွဈနိုငျခရြှေိတဲ့ အယူ အဆကတော့ အိပျရေးပကျြတဲ့အခါမှာ ခန်ဓာကိုယျရောငျရမျးခွငျးတှကေို လှုံ့ဆျောပွီးအခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ အဆဈပွဿနာ တှကေို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
13. ပငျြးတိပငျြးရှဲ ပြော့ခှနေခွေငျး
အလုပျလုပျနတေဲ့အခါမှာ ခန်ဓာကိုယျက အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဒါက ခန်ဓာကိုယျအနအေထားနဲ့ ဆိုငျပါတယျ။ ထိုငျခုံပျေါမှာ ပြော့ခှပွေီး ထိုငျနတေဲ့အခါမှာ အဆဈနဲ့ကွှကျသားတှအေပျေါမှာ ဖိအားသကျရောကျမှုပိုစပွေီး ပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြောတှကေို မတျမတျထားပွီး ပုခုံးတှကေိုနောကျကို ကော့ထားဖို့လိုပါတယျ။ အဆဈနဲ့ကွှကျသားတှအေပျေါမှာ ဖိအားသကျရောကျမှု ပိုစပွေီး ပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြောတှကေို မတျမတျထားပွီး ပုခုံးတှကေိုနောကျကို ကော့ထားဖို့လိုပါတယျ။
14. နာကငျြမှုကို လဈြလြှူရှုထားခွငျး
လကေ့ငျြ့ခနျးစလုပျတဲ့အခါမှာ ကွှကျသားတှနောကငျြတတျပါတယျ။ တဈခြို့ကွှကျသားတှနောတာ ပုံမှနျဖွဈပမေယျ့လညျး ရကျ ပေါငျးမြားစှာကွာရငျ (သို့) ကွှကျသားတှရေောငျလာရငျ (သို့) နာလှနျးလို့ မလှုပျနိုငျ၊ အထိတောငျမခံနိုငျဘူးဆိုရငျတော့ ဂရုစိုကျဖို့ လိုပါတယျ။ အရမျးပွငျးပွငျးထနျထနျ လုပျမိတယျလို့ထငျရငျ သကျသောငျ့သကျသာပွနျလုပျပါ။ နာကငျြမှုက ပြောကျမသှားဘူး ဆိုရငျတော့ ဆေးခနျးပွပါ။
15. ကှနျပြူတာသုံးခြိနျ မြားလှနျးခွငျး
ကှနျပြူတာအသုံးမြားခွငျးက လညျပငျး၊ တံတောငျဆဈ၊ လကျကောကျဝတျ၊ နောကျကြောနဲ့ ပုခုံးတှကေို နာကငျြစပေါတယျ။ ဒီ ပွဿနာက နတေဲ့အနအေထားမှားတာ တဈခုတညျးကွောငျ့ မဟုတျပါဘူး။ ဒီပုံစံတဈမြိုးတညျးနဲ့ အကွာကွီးနလေို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒါက ကွှကျသားတှကေို အလုပျပိစပွေီး နောကျကြောမှာရှိတဲ့ ကြောရိုးဆဈကွား အခပျြလေးတှကေို ဖိအားသကျရောကျစပေါ တယျ။ တဈနာရီတဈခါလောကျ ထိုငျခုံကနထေပွီး လှုပျရှားမှုပွုလုပျဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
16. ပုံစံတဈမြိုးတညျးကို ထပျခါ ထပျခါလုပျခွငျး
ပွေးတဲ့အခါ၊ စကျဘီးနငျးတဲ့အခါ၊ တငျးနဈကစားတဲ့အခါတှမှော လှုပျရှားမှုပုံစံတဈမြိုးတညျးကို ထပျခါထပျခါလုပျမိနိုငျပါတယျ။ ဒီပုံစံကမကောငျးဘူးဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျရဲ့နရောတှအေပျေါမှာ ဖိအားတှမှေားပွီး သကျရောကျမိစပေါတယျ။ ကွှကျသားတှကေို အလုပျပိစတေဲ့အခါမှာ အဆဈတှပေျေါမှာ ဖိအားမြားစပွေီးတော့ ထိခိုကျဒဏျရာရစပေါတယျ။
အရိုးတွေနဲ့အတူ ဆက်သွယ်နေတဲ့ အဆစ်တွေက အလေးတွေကိုခံနိုင်ရည်မရှိပါဘူး။ တစ်ပေါင်အလေးသယ်တိုင်းမှာ ဒူးခေါင်း ပေါ်ကို ၄ ပေါင်ဖိအား သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒီဖိအားက နောက်ကျော၊ တင်ပါးနဲ့ ခြေထောက်တွေကိုပါ သက်ရောက်ပြီး အ ဆစ်တွေဖိထားတာကြာတဲ့အခါမှာ ဒဏ်ဖြစ်ပြီး ပျက်စီးခြင်း၊ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်းကလည်း ရောင်ရမ်းခြင်းအားပေးပြီး လက်အဆစ်တွေအပါအဝင် အဆစ်အားလုံးကို တောင့်တင်းခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ နာကျင်ခြင်းတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။
လက်မနဲ့စာရိုက်ခြင်းက အရွတ်တွေကို ဒဏ်ဖြစ်စေပြီးတော့ လက်မကို ကွေးကွေးလေးအနေအထား ဖြစ်နေစေပါတယ်။ ဖုန်းကို ငုံ့ပြီးကြည့်နေခြင်းကလည်း လည်ပင်နဲ့ ပုခုံးအတွက် မကောင်းပါဘူး။ ခေါင်းရှေ့ကို တစ်လက်မငုံ့ကြည့်တိုင်းမှာ ကြွက်သားတွေ အပေါ်ကို ဝန်ပိုပိစေပါတယ်။ လည်ပင်းကို ရင်ဘတ်ကိုထိအောင် အရမ်းကွေးချလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒါက လည်ပင်းကနေပြီး ခေါင်း တစ်လုံးတည်းကို မဟုတ်ဘဲ ခေါင်း၅လုံးရဲ့အလေးချိန်ကို သယ်ရသလိုဖြစ်စေပါတယ်။
ဒေါက်မြင့်တွေစီးတာ စမတ်ကျတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ဒေါက်မြင့်လေလေ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ရှေ့ကိုပိုပြီး သက်ရောက်မှုရှိစေ လေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ဒူးခေါင်းကိုတည့်မတ်စေဖို့အတွက် ပေါင်ကြွက်သားတွေပိုပြီး အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက် နာကျင်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒေါက်တွေအရမ်းမြင့်တဲ့အခါမှာ ဒူးပေါ်မှာ အားသက်ရောက်မှုတွေ များပါတယ်။ ဒီတော့ ဒေါက်မြင့် နေ့တိုင်းစီး ခြင်းက အရိုးအဆစ်ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေများစေပါတယ်။
စုတ်ပြတ်နေတဲ့ ဖိနပ်တွေကခြေဖဝါးနဲ့ ခြေကျင်းဝတ်တွေကို ထောက်ပံ့မပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဒူးခေါင်း၊ ပေါင်ကို ဒဏ်ဖြစ်စေပါ တယ်။ အားကစားဖိနပ်တွေကိုလည်း ကိုယ်လုပ်မယ့်အားကစားနဲ့ သင့်တော်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးပါ။ ဒါပေမယ့် အလွန်အကျွံ မဖြစ်ပါ စေနဲ့။ အရမ်းအခုအခံများတော့လည်း ခြေထောက်ကိုသဘာဝအတိုင်း လှုပ်ရှားမှုမလုပ်နိုင်စေတော့တဲ့အတွက် ခြေထောက်လည် ပြီး နာကျင်စေပါတယ်။
လက်ဆစ်ချိုးတဲ့အခါမှာ ဂျွတ်ဂျွတ်ဆိုပြီး စိတ်ကျေနပ်လောက်အောင် အသံထွက်လာတာက အဆစ်တဝိုက်မှာရှိတဲ့ အရည်တွေ ကနေပြီး လေပူဖောင်းလေးတွေ ပေါက်ထွက်ခြင်း (သို့) အရိုးကိုဆန့်ကျင်ပြီး အရွတ်ကြေသွားတဲ့ အသံဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှု တစ်ခုအရ လက်ဆစ်ချိုးခြင်းက လက်တွေရောင်စေပြီး လက်သီးဆုပ်တာကို အားလျော့စေတဲ့အတွက် ဒီအကျင့်ကိုဖျောက်တာ ကောင်းပါတယ်။
6. အိတ်အလေးများ သယ်ဆောင်ခြင်း
ပိုက်ဆံအိတ်၊ လက်ကိုင်အိတ်၊ ကျောပိုးအိတ်စသည်ဖြင့် ဘယ်လိုအိတ်မဆို အရမ်းလေးပါက လည်ပင်းနဲ့ ပုခုံးတွေကို နာကျင် စေပါတယ်။ ပုခုံးတစ်ဖက်ပေါ်မှာ အလေးချိန်အများကြီး သယ်ဆောင်ခြင်းက ကိုယ်နေဟန်ချက်နဲ့ လမ်းလျှောက်မှုပုံစံကို ပျက်စေ ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်တည်းနဲ့ အလေးတွေကို အမြဲသယ်နေခြင်းက ကြွက်သားတွေကို ဆန့်အားများစေပြီးတော့ အဆစ်တွေ ကိုလည်း ဒဏ်ဖြစ်စေပါတယ်။
7. အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကြွက်သားအသုံးမှားခြင်း
ကြွက်သားသေးသေးလေးပေါ်မှာ ဝန်အားများတဲ့အခါ ဒီတန်ဖိုးကိုပေးဆပ်ရမှာပါပဲ။ လေးလံတဲ့ တံခါးကြီးတစ်ခုကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ လက်ချောင်းတွေနဲ့တွန်းမယ့်အစား ပုခုံးနဲ့တွန်းမှဖြစ်ပါမယ်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ကောက်မယ်ဆိုရင် ဒူးခေါင်းကို ကွေးပြီး သန်မာတဲ့ခြေထောက်ကြွက်သားတွေသုံးပြီး ပြန်ထပါ။ ပစ္စည်းတစ်ခုခုသယ်တဲ့အခါမှာ လက်ချောင်းတွေကို ဖိအားဖြစ် စေမယ့်အစား လက်ဖဝါးထဲထည့်ပြီး ကိုယ်နဲ့ကပ်ကာ သယ်ဆောင်ပါ။
မှောက်အိပ်တာက ဟောက်တာကိုသက်သာစေနိုင်ပေမယ့်လည်း ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေအတွက်တော့ မဟုတ်ပါ ဘူး။ မှောက်အိပ်တဲ့အခါမှာ ခေါင်းကိုနောက်လန်စေတဲ့အတွက် လည်ပင်းရိုးကို ဖိအားသက်ရောက်စေပါတယ်။ ပက်လက်လှန် အိပ်တာထက် မှောက်အိပ်တာက ခေါင်းကိုတစ်ဖက်တည်း အချိန်အကြာကြီးလန်နေစေတဲ့အတွက် အခြားအဆစ်နဲ့ ကြွက်သား တွေအပေါ်မှာ ဖိအားသက်ရောက်စေပါတယ်။
အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ခြင်းက ကြွက်သားနဲ့အရွတ်တွေက ကိုသန်မာစေသလို ကွေးဆန့်ရတာပိုလွယ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆစ်တွေကိုပိုပြီး လွယ်လွယ်ကူကူလှုပ်ရှားစေကာ အဆစ်ပတ်လည်က ကြွက်သားတွေ အလုပ်လုပ်တာ ပိုကောင်း စေပါတယ်။ ဒါကအဆစ်တွေ ကျန်းမာစေဖို့အတွက် သော့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
10. ခွန်အားတိုး လေ့ကျင့်ခန်း (Strength training) တွေကို ပေါ့ပေ့ါဆဆလုပ်ခြင်း
အသက် ၄၀ ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ အရိုးတွေပါးလာပြီး ကျိုးနိုင်ချေများလာပါတယ်။ ခွန်အားတိုး လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီး ကြွက်သား တွေကို တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် အရိုးဆုံးရှုံးခြင်းကို လျော့နည်းစေပြီး အရိုးအသစ်ကြီးထွားလာမှုကို အားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြွက်သားတွေကို သန်မာလာစေရုံသာမကဘဲ အရိုးသိပ်သည်းစလည်း ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုပေါင်းသွားတဲ့အခါမှာ အဆစ်တွေကို တည်ငြိမ်စေပြီးတော့ ထိခိုက်မှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
11. ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း
စီးကရက်နဲ့ ကွမ်းမှာပါဝင်တဲ့ နီကိုတင်းဓာတ်က အရိုးနဲ့ နောက်ကျောမှာရှိတဲ့ အရိုးကြားထဲက ချပ်ပြားလေးတွေဆီကို သွေးစီး ဆင်းမှု ဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီး အရိုးတည်ဆောက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ကယ်ဆီယမ်တွေ အသုံးပြုမှုကို လည်း ကန့်သတ်လိုက်သလို အရိုးကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ အီစရိုဂျင်ဟော်မုန်းကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အရိုး ကိုထူစေတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအသစ်တွေကို နှေးသွားစေပါတယ်။ ဒီအချက်တွေအားလုံးက အဆစ်ကို အားနည်းသွားစေပြီး တင်ပါးဆုံရိုး ကျိုးလွယ်စေပါတယ်။
အိပ်ရေးဝဝမအိပ်ခြင်းက အဆစ်တွေအပေါ်ကို ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာ အံ့သြစရာပါပဲ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အရိုးရောင်ရောဂါရှိသူတွေက အိပ်ရေးပျက်ပြီးနောက်မှာ နာကျင်မှုကိုပိုပြီးခံစားရတယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အယူ အဆကတော့ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကို လှုံ့ဆော်ပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အဆစ်ပြဿနာ တွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
13. ပျင်းတိပျင်းရွဲ ပျော့ခွေနေခြင်း
အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်က အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါက ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ပျော့ခွေပြီး ထိုင်နေတဲ့အခါမှာ အဆစ်နဲ့ကြွက်သားတွေအပေါ်မှာ ဖိအားသက်ရောက်မှုပိုစေပြီး ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောတွေကို မတ်မတ်ထားပြီး ပုခုံးတွေကိုနောက်ကို ကော့ထားဖို့လိုပါတယ်။ အဆစ်နဲ့ကြွက်သားတွေအပေါ်မှာ ဖိအားသက်ရောက်မှု ပိုစေပြီး ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောတွေကို မတ်မတ်ထားပြီး ပုခုံးတွေကိုနောက်ကို ကော့ထားဖို့လိုပါတယ်။
14. နာကျင်မှုကို လျစ်လျှူရှုထားခြင်း
လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်တဲ့အခါမှာ ကြွက်သားတွေနာကျင်တတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကြွက်သားတွေနာတာ ပုံမှန်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ရက် ပေါင်းများစွာကြာရင် (သို့) ကြွက်သားတွေရောင်လာရင် (သို့) နာလွန်းလို့ မလှုပ်နိုင်၊ အထိတောင်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အရမ်းပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်မိတယ်လို့ထင်ရင် သက်သောင့်သက်သာပြန်လုပ်ပါ။ နာကျင်မှုက ပျောက်မသွားဘူး ဆိုရင်တော့ ဆေးခန်းပြပါ။
15. ကွန်ပျူတာသုံးချိန် များလွန်းခြင်း
ကွန်ပျူတာအသုံးများခြင်းက လည်ပင်း၊ တံတောင်ဆစ်၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ နောက်ကျောနဲ့ ပုခုံးတွေကို နာကျင်စေပါတယ်။ ဒီ ပြဿနာက နေတဲ့အနေအထားမှားတာ တစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပုံစံတစ်မျိုးတည်းနဲ့ အကြာကြီးနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ကြွက်သားတွေကို အလုပ်ပိစေပြီး နောက်ကျောမှာရှိတဲ့ ကျောရိုးဆစ်ကြား အချပ်လေးတွေကို ဖိအားသက်ရောက်စေပါ တယ်။ တစ်နာရီတစ်ခါလောက် ထိုင်ခုံကနေထပြီး လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
16. ပုံစံတစ်မျိုးတည်းကို ထပ်ခါ ထပ်ခါလုပ်ခြင်း
ပြေးတဲ့အခါ၊ စက်ဘီးနင်းတဲ့အခါ၊ တင်းနစ်ကစားတဲ့အခါတွေမှာ လှုပ်ရှားမှုပုံစံတစ်မျိုးတည်းကို ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်မိနိုင်ပါတယ်။ ဒီပုံစံကမကောင်းဘူးဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေရာတွေအပေါ်မှာ ဖိအားတွေမှားပြီး သက်ရောက်မိစေပါတယ်။ ကြွက်သားတွေကို အလုပ်ပိစေတဲ့အခါမှာ အဆစ်တွေပေါ်မှာ ဖိအားများစေပြီးတော့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေပါတယ်။